musha nyika dzakabatana NFL Vatambi Davante Adams Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Wedu Davante Adams anokuudza chokwadi nezve yake Yehudiki Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki (Douglas Adams naPamela Brown), Mukadzi (Devanne Villarreal), Mwanasikana (Deija Leigh Adams), nezvimwe.
Moreso, Childhood Biography inokupa iwe chokwadi chakadzama nezve Davante Adams 'Hama (Doug Adams Jr.) uye Twin sisi (Destiny naD'aishanae). Iyo NFL nyeredzi Hupenyu hweMunhu, Mararamiro, Muhoro uye Net Worth.
Nyaya refu ipfupi, tinoisa pamberi pako mufananidzo wakazara weHupenyu nhoroondo yaDavante Adams, muAmerican nhabvu anogashira yeGreen Bay Packers yeNational Soccer League (NFL). Yedu Biography inotanga kubva paukomana hwake kusvika mukurumbira.
Kuti ukwidzire chishuwo chako cheBiography, isu tinopa magalari nzira yezviitiko zvakatenderedza hupenyu hwaDavante Adams.
Chokwadi, iyo mifananidzo yaunoona pazasi inopfupisa yake Yehudiki Nyaya uye Biography chokwadi.
Davante Adams Biography - Tarisa Hupenyu hwake kubva paucheche hwake kusvika mukurumbira wake.
Ehe, isu tinomuziva semumwe wevanogarisana vanogamuchira muPackers nhoroondo. Kunyangwe kurumbidza kwake, isu tinoziva kuti vashoma chete ndivo vakaverenga pfupiso yenyaya yehudiki yaDavante Adams uye Biography.
Naizvozvo, isu tafunga kukuunzira inonakidza nyaya yaDavante Adams uye kuparara kwebasa rake rekumhanya. Pasina kutambisa nguva ngatienderere mberi.
Davante Adams Childhood Nhau:
Kutanga, Davante Lavell Adams akaberekwa musi we 24th waDecember 1992. Akasvika pasi pano neChina chinofungisisa kuna Pamela Brown nababa vake, Douglas Adams.
Yedu nhoroondo yeAmerica yakazvarwa paSan Francisco Peninsula muNorth California Bay Bay inozivikanwa seRedwood City. Zvekare, Davante Adams aive akazvarwa, pakati pevamwe vatatu hama.
Ipo mukoma wake ari Douglas Adams Jr, mapatya hanzvadzi ndiDestiny naD'aishanae. Iye nevanun'una vake vese vakatorwa kubva mumubatanidzwa wababa vavo, Douglas Adams naamai, Pamela Brown, vane mifananidzo yatinoratidza pazasi.
Tarira vabereki vaDavante Adams - amai Pamela Brown uye baba, Douglas Adams.
Davante Adams akakurira mumusha une mwero munzvimbo yevarombo yeEast Palo Alto, California.
Mukomana wechidiki aive ne kurerwa kwakaoma. Akasimudzwa asina kana chinhu. Semwana mudiki, akafumurwa nemhando dzezvinhu zvisina kuitirwa vana.
Iyo suburb yaakakurira yaive yakaipa zvakaipa. Nzvimbo iyi yaive nehupengo hwekupara mhosva. Chero chinhu chinogona kuitika-vanhu vachiuraya, vachifa, kupfura nekurwa. Muchokwadi, kwaive kupona kwevakanyanya.
Panguva iyoyo, Adams akaparadzanisa nguva yake pakati peimba yevabereki vake nasekuru nasekuru vake.
Kunyange zvakadaro, vabereki vake vakaita basa rakaisvonaka rokuva nechokwadi chokuti akanga aruramisa musoro wake uye kuti zvinhu zvakaipa izvozvo hazvina kuitika kwaari nevanin’ina vake.
Mufananidzo wehudiki waDavante Adams.
Semwana mudiki, airidza pop yambiro, iyo yaive yakajairika nhabvu nhabvu yevana. Asi ipapo, Davante Adams akakunda, kwete mumutambo mumwe chete. Akaitawo zvakanaka muBasketball. Aive mwana akanyarara, asi aine ngoro yekuvimba.
Paaikura, Davante akanga atosarudza zvaaida kuva mune ramangwana. Kuda kwake kwebhola kwakaratidza paakanga ari mugiredhi rechina.
Aizonyora kuti aida kuve NBA kana NFL nyeredzi kana akura. Davante akakura achitamba basketball nenhabvu.
Vabereki vake vaimutsigira saka vakamukurudzira kuteedzera zviroto zvake. Zvisinei, ivo vakapatsanuka mushure meizvozvo. Saka amai vaDavante vakaenderera mberi nekuchengetedza imba kubva ipapo.
Davante Adams Yemhuri Mhemberero:
Mune zvemari, Davante Adams akabva kumba ine mwero. Kunyange zvakadaro, vabereki vake vakashanda mabasa mashoma mashoma kuti vawane raramo. Vakanga vasina zvishoma zvekurarama. Hupenyu hwainge hwakaoma. Ndisingataure ghetto yavaigara.
Amai vaDavante Adams, Pamela Brown, vakashanda mabasa maviri uye kuruka bvudzi usiku kuti vawedzere mari yavo. Saka nekudaro, Davante Adams aive wemhuri ine mari shoma.
Davante Adams Mhuri Mavambo:
Achitaura nezve mhuri yake, Davante Adams Anobata nyika yeAmerica. Iye ndewerudzi rweVatema.
Kunyangwe akaberekerwa muRedwood City muCalifornia, iye chizvarwa cheEast Palo Alto. Baba vake, Douglas Adams, vakaberekerwa ikoko.
Guta rakasiyana nePalo Alto. Kunyangwe ichidaidzwa kuti "East" Palo Alto, dhorobha rakananga kuchamhembe kwePalo Alto. Chagara chiri chinhu chakaparadzaniswa kubva pakuvambwa kwayo.
Zita rekuti Adams rine mavambo echiHebheru uye rinoreva "mwanakomana wePasi dzvuku." Iri rimwe remazita ane mukurumbira emwana wechirume.
Saka nekudaro, munhu aisazoteedzera dzinza rake zvine mutsindo kuburikidza nezita rake. Nekudaro, mukurumbira wayo muUS une budiriro ine mwero.
Kunyanguvezvo, vara rake rinomupa kure somuzvarirwo weAfrica. Inotevera inomiririra yemifananidzo yemhuri yaDavante Adams.
Chiratidziro chemifananidzo yemhuri yaDavante Adams.
Davante Adams Dzidzo:
Adams akaenda kuPalo Alto High Chikoro muPalo Alto, California. Semunhu mukuru-nzira mbiri yekutanga, akatungamira chikoro kumakwikwi ehurumende yeCIF.
Adams aive nemareception makumi matanhatu nemana emayadhi e64 uye 1,094 touchdowns, uye seCornerback, akakwana makumi mana nemana ekutambisa, kusanganisira maviri ekurasikirwa, maviri ekumanikidzwa kupfumburudza, kupindira, uye mana apfuura akadzivirira.
Davante Adams nevamwe vechikwata chake paPalo Alto High Chikoro.
Iyewo akatamba Basketball uye akazoonekwa seyeredzi-mbiri yekutsvaga mumutambo. Fresno State, California, Hawaii, uye San Diego State vakatora Adams.
Uyezve, Davante Adams akaenda kuCalifornia State University, Fresno, kwaakatamba paFresno State Bulldogs nhabvu nhabvu kubva 2011 kusvika 2013.
Davante Adams Ekutanga Basa:
Basa rake rekutanga rakatanga achiri kukoreji. Davante Adams muna 2011, Adams akatsvuka semwana chaiye mutsva kuFresno State mumwaka wake wega. Akaita koreji yake yekutanga munaGunyana 2012.
Iye nechikwata chake vakakunda pamusoro peWeber State Wildcats vane 118 vachigamuchira mayadhi uye maviri touchdowns.
Pazuva rechitanhatu raGumiguru, vachipesana neColorado State Rams, Davante yaive yekutanga ye mitambo misere yakatevedzana nekugamuchira touchdown.
Mufananidzo waDavante achipinda semutambi wepachikoro - nhengo dzemhuri yake dzaivepowo.
Mukukunda, Adam aive nemagamuchira mana emayadhi makumi mana nemasere ekubatwa. Pakazara, mumwaka wake wekupedzisira wemakore muna 41, akatungamira nyika nema2013 ekugashira 131 mayadhi uye makumi maviri nemaviri ekugunzva.
Davante akagadza Mountain West Musangano rekodhi neake makumi maviri nemaviri ekugashira kugashira. Akanyora zvisere kupfuura chero mutambi munyika 24, uye huwandu hwese hwechina mune imwechete-mwaka FBS nhoroondo.
Davante Adams panguva yebasa rake rekutanga.
Iye zvakare anoisa Fresno State basa marekodhi ekugamuchira (233) uye yekugunzva (38) kunyangwe ingori mwaka mbiri chete yeBulldogs. Iyo Associated Press yakamutumidza zita rechipiri-timu All-American.
Pazuva rechi27 raZvita 2013, Adams akazivisa kuti aizosiya mwaka wake wekupedzisira wekoreji uye kupinda mu2014 NFL Draft. Isu tinopa vhidhiyo inotaura nezve kukurumidza kufamba kwake kubva kubasketball kuenda kuAmerican nhabvu.
Davante Adams Biography - Rwendo rweMukurumbira:
Iyo Green Bay Packers yakasarudza Adams mu2014 NFL Draft. Akabuda ari wechipfumbamwe mukuru anogamuchira kuti agadzirwe gore iroro. Pazuva regumi nemaviri raJune 12, akasaina chibvumirano nePackers. Akaridza nhamba yechina inogamuchira muNFL yake yekutanga.
Nekudaro, akaenderera kune iyo Packer nhamba yechitatu inogamuchira mumutambo unotevera. Adams akahwina mukurumbira wake weNFL touchdown pa11-yadhi kupfuura kubva kuna Aaron Rodgers mune 42-10 kukunda kukunda maMinnesota Vikings. Muna 2015, Adams akaisa iyo Packers 'rookie rekodhi.
Adams akaisa rekodhi ne117 mukukunda pamusoro peDallas Cowboys, pamwe ne46-yadhi touchdown.
Akawana zita kuPro Bowl yake yekutanga uye akaiswa pachimakumi mana neshanu nevezera rake paNFL Top 45 Vatambi ve100. Ona pfupikiso yegwara rake kune mukurumbira pasi.
Davante Adams Biography - Nyaya yekubudirira:
Mumutambo weNFC Championship muna 2019 vachipesana ne49ers, Adams aive nemagamuchiro mapfumbamwe emayadhi zana nemakumi matatu nenhatu mukurasikirwa kwemugwagwa we138-37.
Munguva iyi, Adams akave iye ega Packer ane mitambo miviri aine angangoita zana ekugamuchira mayadhi mune imwe postseason.
Moreso, akabuda mutakuri aine angangoita 125 achigamuchira mayadhi mumitambo yake mitatu yepostseason.
Nekudaro, Adams aive nenhoroondo 2020 mwaka. Akatungamira zvakare ligi mukuwana touchdowns yegore iroro remutambo.
NFL Star inoratidzwa ichipemberera kukunda BIG.
Uyezve, ake gumi nemasere ekugamuchira touchdowns ndiwo akanyanya kugadzirwa sezvo Randy Moss aine makumi maviri nematatu muna 18.
Davante's gumi nemasere achitambira touchdowns akasunga rekodhi rekodhi rekodhi neSterling Sharpe's 18 mwaka.
Uye zvakare, ake zana zana nemakumi matatu nematatu akagashira franchise-yakanakisa, achitsiva mwaka waSharpe wa115. Pazuva rechisere raNdira 1993, akaita iyo 8 All-Pro Chikwata chekutanga timu. Ona zvakakwirira zvemitambo yake pazasi.
Davante Adams Akaroora here?:
Ehe, Davante Adams akaroora musikana wake wenguva refu, Devanne Villareal. Vaviri vakasangana pavakanga vari kukoreji uye vakatanga kufambidzana kubva ipapo.
Devanne Villareal inyanzvi. Anoita muhoro wepakati we $37,000.
Vakaita muchato wavo muPebble Beach, California, nemukati mavo. Imwe nguva muna 2017, Adams akamupfimba panguva yavo yeBahamas beach photoshoot, uye zvechokwadi, Villareal akabvuma. Pakupedzisira, vaviri vacho vakatora mhiko dzavo pazuva rechipiri raJune 2.
Davante Adams akaroora musikana wake wenguva yakareba, Devanne Villareal.
Saizvozvowo, aimbova NASCAR mujaho Danica Patrick, Aaron Rodgers, naBryan Bulaga, vepedyo vechikwata, vaivepo. Devanne akataridzika zvinoshamisa muhembe yake chena isina tambo apo chikomba, Adams, aipfeka tuxedo nhema.
Vakashongedza nzvimbo yavo nemwenje wakajeka uye maruva akawanda akanaka. Kuzvitevera munaGunyana 2019, Adams naVillareal vakagamuchira mwanasikana wavo. Adams nemukadzi wake vakamutumidza kuti Deja Leigh Adams.
Mufananidzo wemwanasikana waDavante, Deja Leigh Adams, ari mumotokari yake yematoyi.
Davante Adams Hupenyu hweMhuri:
Mhuri ine mutoro kuupenyu hwokukunda hwenhengo dzayo. Nhau dzakanaka ndedzekuti mhuri inogona kuve nekuzvarwa kana kusarudzwa. Nekudaro, chero yauinayo, zvinokurudzirwa kuichengetedza.
Vabereki vaDavante Adams vakaita zvakawanda kuve nechokwadi chekuti mhoteredzo yavakarera vana vavo haina kukanganisa vana.
Pakanga pane chiedza murima. Panguva ino muBiography yedu, ngatitaure nezve nhengo yega yega yekumba kwaDavante.
Nezve Davante Adams Baba - Douglas Adams:
Baba vaDavante ndiDouglas Adams. Iye mugari weAmerica anofarira zvemitambo. Douglas Adams anobva kuEast Palo Alto, California. Akave akakosha kune zvakaitwa naDavante kubva paMwana.
Douglas akanyura mukuzvivimba kwevana vake, zvisinei nemamiriro avo ezvinhu akaipa. Aifanira kuita mabasa akaderera akawanda kuti atarisire uye atarisire imba.
Ataura izvozvo, mubatanidzwa wababa vaDavante Adams naPamela Brown vakabereka vamwe vana vatatu.
Zvinosuruvarisa, vaviri vacho vakapatsanura apo Davante Adams aive Mwana. Kunyangwe nekuparadzaniswa, Douglas anochengeta hukama hwakanaka nevana vake.
Mufananidzo waDavante Adams nababa vake, Douglas Adams.
Nezve Davante Adams Amai - Pamela Brown:
Davante Lavell Adams 'mum ndiPamela Brown. Hapana mubvunzo kuti Davante anoda amai vake zvakadii. Akafarira hunhu hwekuzvipira mukati memakore ake ekukura.
Iye zvakare akashanda mabasa maviri uyezve nekuruka bvudzi husiku kuti awedzere mari yake. Akanga ari murwi asina kumbokundwa nematambudziko ake.
Kunyangwe kurambana pakati pake naDouglas Adams, akamira zvakasimba kuti vana vake varambe vari munzira chaiyo yekubudirira. Nhau dzakanaka ndedzekuti mafungiro akafanana akaendeswa kuvana vake.
Collage yaDavante naamai vake, Pamela Brown.
Nezve Davante Adams Siblings:
Sezvambotaurwa kubva pakutanga kweBiography yedu, Adams ane vana vatatu (3) vehama. Ane hama, Douglas Adams Jr. uye mapatya hanzvadzi dzinonzi Destiny naD'aishanae. Ivo vanun'una vanogovana chisungo chepedyo.
Kunyangwe hazvo zvakawanda zvisingazivikanwe nezvevakoma vake vatatu, vese vane nhoroondo yakagovaniswa uye vaipinda zvikoro zvimwe chete zveruzhinji mudhorobha ravo. Vatatu ava vanotsigirana.
Iyo pix yakanaka yeAdams nemapatya ake hanzvadzi, Destiny naD'aishanae.
Nezve Davante Adams Relatives:
Mutambi weNFL weAmerica anofanira kunge aine dzimwe hama. Davante Adams ane mashoma mashoma enhengo dzemhuri parutivi pevabereki vake uye vanin'ina, sehama nasekuru, nasekuru nasekuru.
Kunyange zvakadaro, hatisati tanzwisisa chinhu pamusoro pavo. Zvakangodaro, akabata ambuya vake amai vaamai, Carolyn Brown, padyo nemoyo.
Davante akabata amai vake amai, Carolyn Brown, padyo nemoyo wake.
Davante Adams Hupenyu hweMunhu:
Adams haingori yakafara kugamuchira yeGreen Bay Packers. Nyeredzi yeNFL inoita kuti kurovedza muviri kuve kwakanyanya.
Anoshandisa nguva yakawanda nemukadzi wake, Devanne Villareal nemwanasikana, Deja Leigh Adams. Achiri kufarira Basketball zvakare.
Tay, sekudaidzwa dzimwe nguva neshamwari dzake, anoda Gorofu, Kuteerera kuMimhanzi, uye Kushambira. Zvakare Davante Adams lоvеѕ tо trаvеl аnd wаtсh mоvіеѕ mune izvo zviri frее tіmе. Izvozvi zvinofungidzirwa kuti zvinodaro kuzvininipisa.
Frenzy mafoto eanogamuchira akafara kunze kwenhandare yenhabvu.
Naizvozvo, iye anofungidzirwa kuti anofanirwa kunge ari matiiti Iye anoverengeka рhоtоѕ ari izvo zvinofanirwa kunge zviri izvo zvinozivikanwa. Yake Instagram account yega ine vangangoita miriyoni imwe vateveri.
Nyeredzi yeNFL iri kusaina autographs - ichibatana nevazhinji vateveri.
Davante Adams Mararamiro:
Nyeredzi yeNFL mutambi anonakidza. Haana kungozviunganidzira kukunda mumitambo, asiwo kuwanda kwemari. Panguva ino, anokwanisa kutenga chero moyo wake zvaunoda.
Adams ari kugara muDe Pere, Wisconsin (WI), iyo US, mune yake $ 206,950 imba. Akatenga imba iyi muna 2015. Kunze kwenzvimbo iyi, iyo Packers 'yakagashira inogamuchira zvakare akanyorwa imba yake 2525 W. Crais Court iri kutengeswa pamadhora 239,900.
Maonero eDavante's Wisconsin imba yepamusoro.
Imba yacho ine yekurara nhatu uye ine anopfuura 3,000-makiromita tsoka, kusanganisira chiuru mita tsoka dzekupedzisa nzvimbo padanho repasi. Iyo zvakare ine yemitambo padhoro repiri. Vakaivaka muna 1,000.
Davante Adams Mota:
Mutambi weNFL anofarirawo mota uye umbozha. Ane lamborgini aventedor. Motokari iyi inokosha $393,695. Mifananidzo yemotokari yake iri pasi apa.
Iyo collage yeDavante Adams Lamborgini aventedor nedzimwe mota.
Sekureva kweseleb net kukosha, Davante Adams akaunganidza mari yakazara inosvika madhora makumi maviri nemashanu emadhora. Zvakare ane kondirakiti yemakore mana inosvika madhora makumi mashanu nemasere emadhora, pamwe nemabhiriyoni emadhora gumi nemasere ekusaina uyezve $ 25 yakavimbiswa.
Zvakare, Adams ane yazvino avhareji muhoro wepagore we $ 14,500,000. Kunze kwebasa rake rezvemitambo, iye anowana kuburikidza nemashambadziro emagetsi naNike, Pepsi, Musoro & Mapfudzi, Akabatanidzwa Banc, uye Jordan.
Davante Adams Untold Chokwadi:
Kusvika ikozvino, Adams haana kungoponesa basa rake. Akawana nzvimbo semumwe wevanogamuchira vepamusoro munhabvu. Isu tinotarisira kuti achengetedze chinzvimbo chake pakati pevatambi vepamusoro munhabvu.
Even Aaron Rogers, asina kusununguka pakurumbidza, akamupa rumbidzo zhinji. Chii chimwe? Pazasi pane zvishoma zvinokatyamadza zvimwe chokwadi nezveAmerican nhabvu inogashira.
Chokwadi # 1: Davante Adams nekukuvara kwake:
Semutambi, Davante Adams akakuvara zvakanyanya. Maronda amukonzera kuti apotse mitambo yakawanda. Muna 2015, Davante akadzungudza gumbo rake kaviri. Zvakare, mu2016, akasangana neMLL sprain mumwaka wekupedzisira. Saka akapotsa maPackers 'playoff mutambo.
Muna 2017, Davante akazvikuvadza paaitamba neChicago bears. Kuti uwedzere kuenzanisira, mutambi weChicago Bears, Danny Trevathan, akaburitsa ngowani-ku-helmet hit, izvo zvakapa Davante concussion.
Nekudaro, zvakawanda gare gare, Davante akataura nezve kurova kwanga kusiri kwekuzvipira, uye aiyedza kutamba. Kunyange zvakadaro, Trevathan akamiswa mitambo miviri nekuda kwekurova kwake kwakashata.
Zvisinei nekukuvara kwake, Warrior akaramba asingaregi.
Saizvozvowo, mwedzi mitatu gare gare mumwaka mumwe chete iwoyo, Thomas Davis, mutsivi weCarolina Panthers, akarwisa Adams, zvichimuita kuti apotse mitambo yake miviri yekupedzisira.
Uye zvakare, mu2019, Adams akapotsa mitambo mina mushure mekutambura turf chigunwe achitamba pamusoro pePhiladelphia Eagles. Saizvozvo, mumwaka we2020, akarasikirwa neepiri-yekupedzisira.
Chokwadi # 2: Inotyisa ruzivo rwehucheche:
Akambove neruzivo rwehuduku mughetto muEast Palo Alto, California. Pazuva rakatendeka, sezvakangoita munharaunda yake, kwakave nekupfura mukati memba yevabereki vake. Zvisinei, mapatya ake, akanga achiri vaduku panguva iyoyo, akanga ari oga pamba.
Davante akaisa njodzi yekuvhara nepasuo repamberi mumba kuti aunze hanzvadzi dzake mukuchengeteka kunyangwe paive pachine moto. Fungidzira zvese zvakaratidza hunhu hwake hwekuvimba.
Chokwadi # 3: Charity:
Kusiyana nevamwe vakakurumbira, Davante Adams anotora chikamu mumabasa erudo kwaakange aine rubatsiro kuburikidza neGreen & Gold Charity Softball Game. Zvino, ivo vanobatsira hwaro seFeeding America Eastern Wisconsin, semuenzaniso.
Kune rimwe divi, Feeding America Eastern Wisconsin isangano risingabatsiri, rimwe remasangano akakosha kwazvo ekuyamura nzara. Chinangwa chavo ndechekugoverwa kwechikafu chinovaka muviri mudunhu rese kubatsira avo vane nzara.
zvakare, Davante Adams akashamisa yake alma mater neyunifomu nyowani uye yakajeka. Zvakadaro zvakawanda, anopa zvipo kuMake-A-Wish Wisconsin. Nheyo inotarisira vana vane zvirwere zvakakomba. Vanobatsira vana kukunda zvishuvo zvavo zvinosimbisa hupenyu.
Chokwadi # 4: Davante Adams 'Tattoo:
Nyora nyora kugadziridzwa kunoitwa nekuisa inki kana pigment, isingadzimiki kana yenguva pfupi, mukati meganda reganda kugadzira dhizaini. Isu tinodaidza hunyanzvi kana kuita tatoo.
Anogona kunge ari ekushongedza chete (asina chirevo chaicho). Zvakare pamwe nekufananidzira (iine chirevo chakanangana neanopfeka). Uye zvakare, ivo vanogona kunge vari mifananidzo (kuratidzwa kwemumwe munhu kana chinhu).
Adams tattoo ine kunyora kwakakomberedza iyo NERV logo kubva kune yemuvhi akateedzana Evangelion. Saizvozvo, inking kumashure kwake inotakura zita rake, pakati pevamwe.
Mifananidzo yematatoo ake munzvimbo dzakasiyana.
Davante Adams Biography Pfupiso:
Zvakare, kune inokurumidza flip kuburikidza naDavante Adams Biography uye Yevacheche Nyaya, isu tine соmріlеd zvese zvaunoda аbоut iye. Networth yake, zera, kureba, uremu, mudzimai, mukoma, vabereki, mapatya hanzvadzi, hama, kusimuka mukurumbira, uye nhoroondo zviri patafura pazasi.
Zita rizere: Davante Lavell Adams
Zuva rekuzvarwa: 24 Zvita 1992
Nzvimbo yekuzvarirwa: Redwood Guta, California, US
Basa: American nhabvu yakafara inogamuchira
NFL Dhizaini: 2014 / Round: 2 / Sarudza: 53
Dzidzo: Palo Alto High chikoro (Palo Alto, California); Fresno Nyika
Baba: Douglas Adams
Amai: Pamela Brown
Hanzvadzi konama: Doug Adams Jr.
Twin sisters Destiny Adams
Hama: Carolyn Brown (gogo)
Mumwe: Devanne Villarreal (m. 2018)
Zuva Chikwangwani (Zodiac): Capricorn
Hobbies: Gorofu, basketball, kurovedza muviri, Kuteerera Mimhanzi, uye Kushambira.
Net Worth: Mamiriyoni mana emadhora (25)
Mukuvhara Davante Adams 'Biography uye Yehucheche Hupenyu Hupenyu Nyaya, tinovimba wakadzidza zvidzidzo zvishoma. Davante Adams akabva kwakashata kumashure. Aigara nevanhu vakanga vasina hurongwa hwehupenyu hwavo.
Misikanzwa uye vabati vakazadza nzvimbo yekumusha kwaakakurira. Kunyanguvezvo, iye, pamwe chete navabereki vake, vakaramba kurasikirwa nokurangarira.
Davante, uyo akarota kuva mutambi wenyeredzi kubva paUdiki, akaenderera mberi nekushanda nesimba uye nekudzidziswa kwakasimba kubva kune varairidzi vake vakati wandei. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo. Isu tinoshuva Indulgence yako Kunyoresa kune zvimwe NFL Vatambi biography chokwadi neepamusoro-notch mhando.